आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस् ! जानी राखौं – Annapurna Daily
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस् ! जानी राखौं
On Jun 29, 2021 78,448
एजेन्सी । चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ ।